vendredi, 26 novembre 2021 22:15
Aloavy volan'ny banky sy vidi-tsimenitra
Pilo kely : Aloavy volan'ny banky sy vidi-tsimenitra io sao alain'ny huissier eo ny giropitsika sy ny fanadiovan-drano an.
vendredi, 26 novembre 2021 21:19
Jirama : Nasain'ny Banky iraisam-pirenena mamerim-bola
Nandefa taratasy tamin'ny minisitry ny toekarena sy ny ny vola ny Banky iraisam-pirenena ny 16 novambra 2021, tamin'ny alalan'ny Tale aty Madagasikara, sy ny Faritra Afrika atsinana sy atsimo, Idah Pswarayi-Riddihough, mitaky ny hamerenan'ny Governemanta Malagasy sy ny Jirama ny ampaham-bola namatsiana ny Jirama.
Satria, hoy ny Banky, tsy nifanaraka tamin'ny fifanarahana ny ampiasana ny vola araka ny tetikasa PAGOSE (Projet d'Amélioration de la Gouvernance et des Opérations dans le Secteur de l'Eléctricité), izay fifanarahana famatsiam-bola niaraka tamin'ny IDA na ny Association Internationale de Développement.
vendredi, 26 novembre 2021 09:13
Mety mahasoa anao : Atao ahoana raha mitete ny tafon-trano
Rehefa tonga ny fahavaratra vao hita eo avokoa ireo tafo mitete, na terrasse lasa mando ny ao ambany plafond.
1- Tafo fanitso na Tôle
Ny tafo fanitso, dia apetaka eo ambony madrier na hazo carré na bois rond, izay atsivalana isaky ny 50cm eo, manaraka ny fanarin'ny rano.
5-20% eo ny pente.
Avy aty ambany no apetaka mialoha, fenoana ny halavan'ny trano, dia miakatra tsikelikely, ary tsindriana 15-20cm eo. Eny amin'ny farany ambony vao manapaka ny tôle hipetrahan'ny faitière, na ilay tôle tsy misy ondulation mandrakotra ny tafo andaniny sy ankilany.
Eny amin'ny sisin'ny rindrina ihany koa no madidy ny tôle raha misy mihoatra na misy fausse équerre, izany hoe tsy nahitsy ny zoron-trano.
Atao tsindry vitrany 2 na 3 isaky ny tôle no mifanindry amin'ny halavan'ny trano, raha tôle ondulé, isaky ny vitrana kosa raha tôle galvabac.
vendredi, 26 novembre 2021 09:12